Ukusetyenziswa kwezixhobo zasendlini. Funda ukulawula ityala lakho lombane | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ukusetyenziswa kwezixhobo zasendlini
IsiJamani sasePortillo | | Uqoqosho lwaseKhaya
Xa sithenga isixhobo esitsha, sifuna ukuba sisebenze ngokufanelekileyo, kulula ukusisebenzisa kunye nokwenza imisebenzi ehambelana naso ngokuchanekileyo. Enye yeenzuzo zophuhliso lobuchwephesha kukuba ukusetyenziswa kwezixhobo zasendlini yehlile ukubulela kwinkqubela phambili yayo ukusebenza kakuhle kwamandla. Mhlawumbi ityala lombane liya kufikelela kuthi kwaye siyothuswa ngulo mfanekiso siwubonayo kwaye kungenxa yokuba asikuthatheli ngqalelo ukusetyenziswa kwezinye izixhobo zombane ezitya kakhulu kunezinye.
Ngaba uyazi ukuba umatshini wokuhlamba okanye i-ceramic hob itya ntoni? Ngaba baneendleko ezifanayo nomabonakude okanye isomisi seenwele? Ukuba ufuna ukwazi ukuba ukusetyenziswa kwezixhobo zasekhaya kuyintoni kwaye kuyichaphazela njani imali oyilwayo yombane, qhubeka ufunda eli nqaku.
1 Ukusetyenziswa komyinge wezixhobo zasendlini
2 Ilebheli efanelekileyo yokusebenza kwamandla
3 Yintoni ukusetyenziswa kwesiqandisi kunye nomatshini wokuhlamba?
3.2 Umatshini wokuhlamba
Ukusetyenziswa komyinge wezixhobo zasendlini
Kuyacaca ukuba ayizizo zonke izixhobo zombane ezifuna amandla afanayo ukuze zisebenze. Ezinye zinamandla kwaye ezinye zincinci. Ngamnye unendima yakhe ekhaya kwaye, Kuxhomekeke ekusetyenzisweni kunye nobuninzi bayo, siya kuba sisebenzisa amandla amaninzi okanye ngaphantsi. Umzekelo, sinokubukela umabonwakude ixesha elide ukuze ibe nokusetyenziswa okufana noko kokuhlamba izitya ukuhlamba ngokupheleleyo. Kuhlobo ngalunye lwesixhobo kufuneka sithathele ingqalelo imodeli. Ayizizo zonke ii-microwaves okanye iifriji ezidla into efanayo.
Itekhnoloji iqhubela phambili ngokuxhuma kunye nemida namhlanje. Ukusetyenziswa kwamandla kwisixhobo ngasinye kuya kusanda kwaye oko kunokusinceda songele ityala lombane. Nangona kunjalo, nokuba isixhobo sinokuba nempumelelo kangakanani, ukuba asisisebenzisi kakuhle, Uya kugqiba utye ngokufanayo kwaye kuya kufuneka uyihlawule iphuma epokothweni.
Kuba imodeli nganye kunye nophawu lwesixhobo ngasinye lwahlukile, sinelebheli yokusebenzisa amandla esivumela ukuba sazi ukusetyenziswa ngokubanzi kwesi sixhobo kuthethwa ngaso. Ukongeza, iyasivumela ukuba sazi ezinye izinto ezibalulekileyo ezinje ngengxolo eyenzayo ngelixa isebenza, amanzi ewasebenzisayo (kwimeko yoomatshini bokuhlamba iimpahla, izitya zokuhlamba izitya, njl. Njl.) Kunye namandla aphezulu (oku kuhambelana i amandla ombane Isivumelwano esasifunyenwe ekhaya).
Ilebheli efanelekileyo yokusebenza kwamandla
Ukusetyenziswa kwelebheli njengereferensi eyimfuneko ekuthengeni kwakho okanye akunjalo kubalulekile ukonga umbane. Xa siza kuthenga isixhobo akufuneki sijonge kuphela kwixabiso, kodwa siza kusibiza ntoni kwixesha elizayo. Kuya kufuneka ucinge ukuba esi sixhobo sixabisa malini ngexesha elinikiweyo ayisiyongxaki njengaleyo siza kuyisebenzisa kunye nokusetyenziswa kwayo iminyaka.
Siza kwenza umzekelo ukuze iqondwe ngcono. Ukuba uthenga umatshini wokuhlamba oxabisa i-euro ezingama-300 kodwa une-A + esebenza ngokukuko, siya kudla ngaphezulu kulo lonke ixesha lokuphila kunokuba luncedo xa sithenga umatshini wokuhlamba onama-800 eeuros, kodwa une-A +++ ukusebenza ngokukuko. Oko kukuthi, ngelo xesha siya kuba sisebenzisa i-euro ezingama-500 ngaphezulu ekuthengeni umatshini wokuhlamba impahla. Nangona kunjalo, oomatshini bokuhlamba iimpahla bahlala behlala ngaphezulu kweminyaka eli-10. Kwiminyaka eli-10 okanye nangaphezulu, ngokuqinisekileyo lowo une-A +++ ukusebenza ngokukuncedayo wakwenza ulungisa kwaye wonge kakhulu ekusebenziseni umbane.
Okuphambili, xa sisiya kuthenga isixhobo, sijonga kuphela kwimodeli nakwixabiso. Ingcebiso Kukucinga ngesixhobo ekuthethwa ngaso kunye nokusetyenziswa kunye nexesha eliqikelelweyo ukuba baya kusisebenzela. I-ceramic hob, umabonwakude, imicrowave, zizixhobo zombane ezihlala iminyaka emininzi kwaye kufanelekile ukuba zijongwe ngokusebenza kwazo. Ngaphandle koko, siya kufumana isimanga xa sifunda ixabiso lentlawulo yombane.
Siza kuhlalutya ukusetyenziswa kwezixhobo ezibaluleke kakhulu zekhaya ekhaya.
Yintoni ukusetyenziswa kwesiqandisi kunye nomatshini wokuhlamba?
Ezi zixhobo zimbini ezingenakho ukungabikho ekhaya. Ziyinto ebalulekileyo kwaye kufuneka zisetyenziswe ewe okanye ewe. Ifriji kufuneka ihlale isebenza kwaye akukho xesha lokuphumla. Kwelinye icala, umatshini wokuhlamba iimpahla ubaleka phakathi kwe-2 kunye ne-4 ngeveki, kuxhomekeka kwinani labantu abahlala ekhaya kunye nendlela yabo yokuphila. Ke ngoko, zizixhobo zombane ezimbini eziza kwenza ukusetyenziswa okukhulu ekhaya kwaye oko kuya kubonakala kumthetho oyilwayo.
Ifriji ngokwayo ayisebenzisi amandla amaninzi. Ayisiyonto ifuna amandla amaninzi ukupholisa ukutya. Nangona kunjalo, Yintoni eyenza ukusetyenziswa kwayo kuphezulu kukuba ihlala inxibelelana. Esi sizathu sokuba ifriji ithathe phantse I-20% yamandla onke osetyenziso lwendlu. Esi sisizathu esaneleyo ukuze, xa uthenga ifriji, sihlalutya ileyibhile yokusebenza kwamandla ngezikhonkwane kunye neempawu. Khetha ezo zifriji batya kuphela i-170-190 KWh ngonyaka. Oku kuguqulela kuphela kwi-20-30 ye-euro ngonyaka.
Nje ukuba oku kuhlalutywe, kufikelelwe kwisigqibo sokuba, ukuba ifriji ibiza kakhulu kuba isebenza kakuhle, ekuhambeni kwexesha iya kuba yinzuzo kuba ukusetyenziswa kwayo kuya kuba kuncinci.
Ngoku masiqhubeke kwimeko yomatshini wokuhlamba. Ukwazi ukuba umatshini wokuhlamba uchitha malini, kufuneka kuthathelwe ingqalelo izinto ezininzi. Ayisiyiyo kuphela ukuba kufuneka sijonge iilebheli zokulinganiswa kwamandla, kodwa sithathela ingqalelo ixesha lokujikeleza esiza kulwenza rhoqo kunye neqondo lobushushu esibeka kulo amanzi.
Ayifani nokuhlamba kwimijikelo emide nangamanzi ashushu kunokusebenzisa imijikelezo ebonakalayo yemizuzu engama-20 kunye namanzi abandayo. Ukusetyenziswa kuphakama kakhulu kwiindawo ezimbini ezigqithisileyo. Ngayiphi na imeko, iilebheli zamandla ziya kusinika isikhombisi esifanelekileyo sokusetyenziswa gwenxa kwaye kufuneka senze izibalo. Ngokuqinisekileyo oko Kufanelekile ukukhetha ukuhlawula ngaphezulu ukuthengwa komatshini wokuhlamba kodwa emva koko wonge kwibhili yeminyaka ezayo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungazi ngcono ukuba zeziphi izinto ekufuneka uzithathele ingqalelo ukonga kwibhili yombane kwaye ufunde okungakumbi malunga nokusetyenziswa kwezixhobo ezibaluleke kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » Ukusetyenziswa kwezixhobo zasendlini
Zeziphi izinto ezinokuphinda zisetyenziswe kwakhona
Ngubani ofumene umbane?